sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala nke Excelle GT XT 2011-2012 China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala nke Excelle GT XT 2011-2012
Sistemụ igwe eji arụ ọrụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo 8.0 maka Excelle GT XT 2011-2012
sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala maka Excelle Tụlee redio redio analog, DAB + na-enweta nsonaazụ ụda dị elu na mgbasa ozi na-enweghị mkpọtụ, nke na-abawanye n'ọdụ ụgbọelu redio gburugburu ọtụtụ mba Europe ebe enwere akara DAB +.
N'azụ ndị nọ ọdụ nwere ike na-ekiri vidiyo diski DVD site na onye isi na - elele ebe onye na - akwọ ụgbọ mmiri na - eji igwe na - agagharị na sistemụ multimedia nke Excelle.
sistemu igwe eji eme ihe maka Excelle Ejikọtara ya na igwe Bluetooth Bluetooth BC5, na-akwado ngakọrịta akwụkwọ ndekọ, oku ana-enweghị, na egwu sitere na ekwentị gị.
sistemụ igwe eji arụ ọrụ maka Excelle wuru na modul WIFI, na-akwado ijikọ ebe a na-egwu WIFI na ịntanetị ịntanetị. Ọ nwekwara ike ịkwado ịntanetị 3G & 4G, chọrọ ịzụta mpụga 3G & 3GG USB modem dakọtara ma tinye kaadị SIM n'ime ọdụ ụgbọelu telecom nke mpaghara gị. Nwee ntụrụndụ dị elu n'oge ị na-anya ụgbọala.
ụgbọ ala maka Magotan 2012 Kpọtụrụ ugbu a
Etu ụgbọ ala Android 8.0 maka PASSAT 2013 Kpọtụrụ ugbu a
android ụgbọ ala dvd player maka Santa Fe 2005 Kpọtụrụ ugbu a
stereo ụgbọ ala maka SAGITAR 2015 Kpọtụrụ ugbu a